Injineer caan ah oo lagu dilay Qarax ka dhacay Muqdisho [Faahfaahin]
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha qaraxa gaari oo xalay fiidkii ka dhacay magaaladda Muqdisho, ee caasimadda Soomaaliya.
Inta la xaqiijiyay hal ruux oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Cabdi Kaariye ayaa ku dhintay qaraxa oo ahaa mid lagu dhejiyay kursiga laga kaxeeya Gaariga.
Gaariga ayaa ku qarxay xili uu marayay Isgoyska KM-4 [Lambar Afar].
Allah ha u naxariistee Maxamed ayaa ahaa Injineer wax kusoo bartay dalka Pakistan, waxaana uu kamid ahaa dhalinyarada caasimadda ugu fir-fircoon, ee aadka loo yaqaano.
Dhaawac culus ayaa kasoo gaarey qaraxa oo dab xooggan qabadsiiyay Gaarigiisa, waxaana saacado kadib uu ku geeriyoodey Isbitaal ku yaalla Muqdisho, sida ay qaar kamid ah Saaxiibadiisa u xaqiijiyeen Garowe Online.
Lama oga sababta loo beegsaday Injineerka iyo cida ka dambeysa dilkiisa, balse Kooxda Al-Shabaab ayaa caan ku ah dilalka loo adeegsado qaraxyada lagu dhejio baabuurta ay wataan dadka u shaqeeya dowladda, hay'adaha iyo dadka kale ee muhiimka ah.
Qaraxa ayaa noqonaya midkii labaad oo noociisa ah oo isla wadada KM-4, iyadoo kii midkan ka horeeyay lagu dhaawacay sarkaal katirsan Hay'adda Dembi Baarita Soomaaliya ee CID-da.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay fashil dhanka amniga ah, iyadoo ay sugu la'adahay amaanka Muqdisho, oo ay ka dhacayaan qaraxyo iyo dilal shacab badan ay ku dhimanayaan.
Qaraxyada baabuurta loo adeegsado ayaa ka dhacaya derbiga Madaxtooyadda iyo meelaha sida aadka amnigooda loo adkeeyay, ee ay degan yihiin madaxda sare ee dowladda Federaalka, iyadoo wadooyinka ay ciidamado ku sugan yihiin.
Khubaradda amniga ayaa aaminsan in iyadoo aan Al-Shabaab looga adkaan, islamarkaana laga sifeyn gobollada deriska la ah Muqdisho [Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe], aan la xasilin karin caasimadda.
Faahfaahin: Qarax ka dhacay Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 07.03.2019. 12:34
Weerarka qaraxa loo adeegsaday kadib waxaa goobta laga soo qaadey meydad iyo dhaawacyo badan.
Qarax Gaari oo ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 12.02.2019. 10:23
Qarax ka dhacay Muqdisho iyo dowladda oo ka hadashay
Soomaliya 13.02.2018. 22:27
Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha Qaraxyadii Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 09.11.2018. 22:12
Xildhibaan lagu dilay Qarax ka dhacay Muqdisho [Fahfaahin]
Soomaliya 08.11.2018. 18:17
Faahfaahin Khasaaraha ka dhashay Qarax Muqdisho ka dhacay [Sawirro]
Soomaliya 10.04.2019. 12:06
Dil ka dhacay Muqdisho iyo weeraro laga digay
Soomaliya 01.03.2018. 10:53
Dad hal qoys kasoo jeeda oo lagu laayay Muqdisho [Faahfaahin]
Soomaliya 18.04.2019. 10:00
Itoobiya: 35 ku dhimatay rabshado ka dhacay gobol doonaya is-maamul 22.07.2019. 22:15
Mursal oo amar dul-dhigay guddiga diyaarinta Sharciga Doorashooyinka 22.07.2019. 19:57
Nooca doorasho ee Soomaaliya ka qabsoomi karta sanadka 2020-21 22.07.2019. 17:59
Raggii loo xukumay kiiska Caasha oo Maxkamada Sare lasoo taagayo 22.07.2019. 14:56
Khasaaraha qaraxii agagaarka madaarka Muqdisho oo la shaaciyey 22.07.2019. 14:11
Khayre oo dalab hordhigay safiiro uu kula kulmay Dhuusamareeb 22.07.2019. 13:12